गोबिन्द केसी कार्यरत अस्पतालमा,रिसाहा डाक्टर अनि छुच्चा कर्मचारी – Jana Prashasan
गोबिन्द केसी कार्यरत अस्पतालमा,रिसाहा डाक्टर अनि छुच्चा कर्मचारी
हाडजोर्नीको समस्या भएर अस्पताल आएका बिरामी डाक्टर नहुँदा निजीमा गईरहेका छन् । हाडजोर्नीका चिकित्सक गोविन्द केसी अस्पतालको बेडमा सुतिरहेका छन् ।
। महारागंजस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका एक चिकित्सक १६औं पटक अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षामा कुनै साईनो नभएको माग राखेर त्यहाँका चिकित्सक गोविन्द केसीले अस्पलातमा सेवा नगरेको धेरै भयो । यो अस्पतालका हाडजोर्नी बिभागका प्रमुखसमेत रहेका केसीले उपचार नगर्दा यो रोगले पीडित धेरै बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् । यही सेरोफेरोमा पत्रकारहरु राजु स्याङ्तान, सपना महर्जन, अजवी पौड्याल, सृजना खड्काले यो अस्पतालको स्ट्रिङ अप्रेसन गरेका छन् । त्यसको केही अंश यस्तो छ ।
बिहान ११ बजे। बर्थिङ सेन्टरमा एक कर्मचारी सफा गर्दै थिइन्। आफ्नो काम सुरु नगर्दै उनी बर्बराउन थालिन्, ‘जति सफा गरे पनि हुँदैन। कति फोहोर गर्न सकेका ? ’ उनी कामभन्दा बढी रिसाउन थालिन् । त्यही बेला तातो सुप लिएर आइपुगे एकजना कुरुवा। कर्मचारीले उनीमाथि रिस पोखिन्। ‘सफा गर्न लागेको, आँखा देख्नुहुन्न ? ’ हातमा सुप लिएका कुरुवा अलमल परे। ‘सफा गरिनसकेसम्म कोही भित्र जाने होइन,’ उनले आदेशको लवजमा भनिन्। कुरुवा ढोकैमा कुरिरहे। १५ मिनेट बित्यो। सुत्केरी श्रीमतीलाई सुप ल्याएको भन्दै उनी अनुनय गरिरहन्थे। कर्मचारी सुन्दिनथिन्। सुप सेलायो। फेरि तातो सुप लिन कुरुवा क्यान्टिनतर्फ दौडिए।
नवीन पाण्डेका सहकर्मी गतहप्ता मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे। घाइतेलाई लिएर रातको १२ बजे उनी टिचिङ अस्पताल पुगे। टाउकोबाट भलभल्ती रगत बगिरहेको थियो। इमर्जेन्सी वार्डमा दुई जना मात्रै डाक्टर थिए। मिलन डाक्टर पर्खिरहे। डेढ घन्टा कुर्दा पनि नआएपछि उनी घाइतेलाई लिएर निजी अस्पताल गएको अन्नपूर्णले लेखेको छ ।
News Desk0response मङ्लबार, माघ ८, २०७५